Ọrụ Epic 'Easy Anti-Cheat dakọtara na Linux na Mac | Site na Linux
Na mbido afọ a, Emere Anti-Cheat dị mfe maka Windows maka ndị mmepe niile n'efu na ebe ọ bụ na Septemba 23, Ọrụ Epic Online agbatịla nkwado na Linux na Mac maka ndị mmepe na -ejigide ụdị egwuregwu ha zuru oke maka nyiwe ndị a.
Ma ọ bụ na June, Egwuregwu Epic bidoro ọrụ nkata olu na ọrụ aghụghọ na ndị mmepe nwere ike itinye n'ọrụ n'egwuregwu ha. A na -enye ọrụ ndị a dị ka akụkụ nke ụlọ ọrụ Epic Online Services, nke enwere ike iji ya na igwe egwuregwu ọ bụla ma dakọtara na Windows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, na gam akporo.
Dị ka ọrụ ndị ọzọ agụnyere na EOS SDK, ejikwa atụmatụ nkwukọrịta olu na egwuregwu Epic na -ewu ewu Battle Royale. Ọrụ nkata olu bụ ikpo okwu ma na-akwado nkata mmadụ na otu n'ime ụlọ nkata na n'oge egwuregwu egwuregwu.
Mgbe ị na -eji ọrụ ahụ, a na -ebute ozi olu site na sava Epic na teknụzụ na -ejikwa nyocha niile na QoS. Epic na-ekwu na teknụzụ 'agbakwunyerela ma nwalee ọgụ na Fortnite,' nke na-ahụ na ọ nwere ike ijikwa nde ndị egwuregwu n'otu oge.
Na mgbakwunye na nkata olu, Ọrụ Epic Online na-agbakwunye nkwado maka Easy Anti-Cheat, ọrụ emere iji wepu ndị aghụghọ wee malite ya na egwuregwu ịntanetị. Easy Anti-Cheat dị na mbụ maka ndị nrụpụta ndị ọzọ ka ha nye ikike egwuregwu ha, mana ha enwerela onwe ha ugbu a dịka akụkụ nke ọrụ Epic Online ma kwesịrị ikwe ka ọtụtụ ndị mmepe jiri ha mee ihe.
Epic na-ekwu na ngwanrọ aghụghọ nke dị ka nke a na-aghọwanye ihe dị mkpa Dị ka egwuregwu ndị ọzọ na-enye egwuregwu n'etiti PC na nyiwe ndị ọzọ, ebe ndị aghụghọ na-adịkarị na PC.
Dị ka ngwanrọ mgbochi aghụghọ ọzọ, Easy Anti-Cheat nwere ike bute nsogbu maka ndị na-abụghị aghụghọ na ịkpọ ngwanrọ aka ha dị ọcha dị ka malware. Ya mere, ọ tebeghị aka ịbụ ezigbo ihe ngwọta. Mana site n'ịghọ aghụghọ na -eti ọtụtụ egwuregwu ụwa kachasị egwu, ọ ga -esiri gị ike ịrụ ụka na ndị mmepe nwere ngwa ọzọ na ngwa agha ha.
Epic gụnyere ọrụ abụọ ahụ dị ka akụkụ nke nnukwu Epic nke ọrụ ịntanetị, ejikọghị ha na igwe egwuregwu ma ọ bụ ụlọ ahịa nke ha. Na ajụjụ a na -ajụkarị na saịtị gị; ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ na -enye ọrụ ndị ahụ n'efu "na mbọ iji gbaa mbọ nabata onyinye Epic niile" yana imepụta nnukwu akaụntụ n'ofe ụlọ ọrụ na nyiwe ibe ya.
Mmejuputa iwu a na-agbakwụnye Easy Anti-Cheat na ndepụta ngwaọrụ ndị mmepe ga-enwe ike ịnweta. dị ka akụkụ nke Epic Online Services SDK. Epic zụtara ụlọ ọrụ dabere na Helsinki nke mepụtara ngwanrọ ahụ na 2018 wee jiri ọgwụ mgbochi aghụghọ na Fortnite. Enwere ọtụtụ narị egwuregwu ndị ọzọ na -ejikwa sọftụwia na -ewepụ aghụghọ, gụnyere Mediatonic's Fall Guys, nke nwere nnukwu nsogbu aghụghọ.
Ndị nrụpụta ga-enwe ike inyocha ma mezuo usoro mgbochi aghụghọ maka egwuregwu gị site n'enyemaka nke ngwanrọ. Dịkwa ka Epic na-ezube ịnye mmelite mgbochi dị mfe na mmelite na-aga n'ihu, ndị na-emepụta egwuregwu ga-enwe ike igbochi ndị egwuregwu ọjọọ isonye ọbụlagodi ka ndị aghụghọ na-amalite ịgbanarị nchọpụta.
N'ikwu ya, ngwanrọ ahụ ezughị oke yana egwuregwu ịntanetị dị iche iche na -eji ya ka na -eso ndị aghụghọ aghọgbu. Dabere na data Surfshark VPN nakọtara ọnwa ole na ole gara aga, dịka ọmụmaatụ, Fortnite nwere echiche YouTube metụtara aghụghọ (ugboro 26,822,000 ka ọ bụrụ nke ziri ezi) karịa Overwatch, n'ọnọdụ nke abụọ. Agbanyeghị na ọ bụghị onye ọ bụla kiriri vidiyo YouTube ndị a wayo,
“Ọrụ Epic Online dị maka ijikọ ndị mmepe na ndị egwuregwu na nyiwe niile, gụnyere Steam Deck na -abịanụ, anyị nwere obi ụtọ ime ya. Otu nzọụkwụ na ntụziaka a. «
N'afọ mbụ a, egwuregwu Anti-Cheat dị mfe maka Windows ka ndị mmepe niile nwere n'efu. Taa, anyị na -agbasawanye nkwado na Linux na Mac maka ndị mmepe na -ejigide ụdị egwuregwu ha zuru oke maka nyiwe ndị a. «
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » Ọrụ Epic 'Easy Anti-Cheat dakọtara na Linux na Mac
Mgbakọ igwe ojii: Ngwa na nyiwe isi mmalite ugbu a